Fedora 17 မှာဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲ။ | Linux မှ
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က Beefy Miracle အမည်နှင့်နောက် Fedora 17 operating system ၏ဖြန့်ချိမည့်အချိန်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ဤအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောဗားရှင်းတွင်ထည့်သွင်းမည့်အင်္ဂါရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရန်အချိန်တန်ပြီ။
Fedora အင်ဂျင်နီယာ ဦး ဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးမှာ (FESCoဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်မှာကျင်းပခဲ့သည့် developer များအတည်ပြုခဲ့သည် အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များ ဗားရှင်းအတွက် Fedora 17.
Fedora 17 ထူးခြားချက်များ
အရာအားလုံးကို / usr သို့ပြောင်းခြင်းအားဖြင့်ရိုးရှင်းသောဖိုင်စနစ် (ရှိ / bin နှင့် / usr / bin, သို့မဟုတ် / lib နှင့် / usr / lib);
GNOME Shell အတွက် software (ဆိုလိုသည်မှာ GNOME Shell ကိုသုံးရန် 3d acceleration ကိုမလိုအပ်တော့ပါ);
DRI2 3D drivers များသာကြိုတင်တပ်ဆင်ပြီးပါလိမ့်မည် (Goodbye DRI1) ။
PackageKit နှင့် KDE Plasma ပေါင်းစပ်ခြင်း၊
SCSI အပေါ်အခြေခံပြီး KVM အတွက် virtio-scsi သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာဗိသုကာအသစ်၊
Systemd ပေါင်းစည်းမှု (နှုတ်ဆက် sysV);
NS-3 discrete-event network simulator;
ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသည့် Anaconda Installer?
ကြည့်ရှုရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ Fedora 17 လွှတ်ပေးရန်အချိန်ဇယား.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Fedora 17 မှာဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲ။
Pache Ko Morrison ဟုသူကပြောသည်
ငါမနေ့က 16 ကိုပဲ install လိုက်တယ်။
PacheKo Morrison အားစာပြန်ပါ
စန်တီယာဂို Burgos ဟုသူကပြောသည်
ငါရှင်းပြတဲ့အချက်တွေအများကြီးနားမလည်ဘူးထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Fedora ကလာတဲ့အစီအစဉ်တွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာမယ်။ (ငါ့တက္ကသိုလ်ကစာသင်တာကိုစောင့်ဆိုင်းပြီး Fedora အသစ်ကို LTS ကိုအခြေခံထားတဲ့ Mint နဲ့အတူပြန်ယူပါမယ်) 😀
usr နှင့်ပတ်သက်သောမှတ်ချက်များနှင့်အထက်နှင့်အောက်ရှိသူများအတွက် - ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်ဖိုင်စနစ်နှင့်အတူကျွန်ုပ်ကိုအလွန်ကြောက်ရွံ့သည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်ထူးဆန်းသောလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ပါက Fedora ကိုထည့်သွင်းထားသော PC များ၌၎င်း packets အမြောက်အများမည်မျှကိုင်တွယ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိနိုင်ပါ။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်၍ ဤဖိုင်စနစ်ကိုထောက်ပံ့ပါသို့မဟုတ် / var, / home, / opt လမ်းညွှန်များ (ကျွန်ုပ်အများဆုံးသိမ်းပိုက်ထားသည့်) ကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်မည်ကိုထောက်ခံပါ။ ဒါကကြံ့ခိုင်တဲ့ distro ကြောင့်အရာအားလုံးကောင်းသွားမျှော်လင့်ပါတယ်
Santiago Burgos သို့ပြန်သွားပါ
အောက်ပါလင့်ခ်တွင် Fedora စီမံကိန်း၏ဝီကီအရင်းအမြစ်မှလက်ခံထားသောအင်္ဂါရပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုမြင်တွေ့နိုင်သည် http://fedoraproject.org/wiki/Releases/17/FeatureList "Move all to / usr" လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းမှာဖိုင်တွေနဲ့ configurations / bin, / sbin နဲ့ / lib to / usr ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတယ်။
eM ပြော eM ဟုသူကပြောသည်
ငါပထမ ဦး ဆုံးအချက်နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိ, လှုပ်ရှားမှု / usr ကိုရည်ညွှန်းသည်
eM Di eM သို့စာပြန်ပါ
/ bin နှင့် / usr / bin သို့မဟုတ် / lib နှင့် / usr / lib ဖိုလ်ဒါများအစား…အရာအားလုံးသည် / usr သို့သွားသည်။
Fedora developer များအဆိုအရ (နှင့်အခြား distros များနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့သည့်တူညီသောအရာတစ်ခု) သည်ထိုခွဲဝေမှုသည်အဓိပ္ပာယ်မဲ့သွားသည်။
BTRFS သည်အတော်အတန်အားကောင်းသည့် file system တစ်ခုဖြစ်ပြီး ext4 ကိုအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ BTRFS သည် ext4 ထက်ပိုကောင်းကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ (ကြီးမားသောဖိုင်များကို solid hard drive များသို့ကူးယူသည့်ကိစ္စ မှလွဲ၍ - SSD-) ။
ခင်ဗျားယောက်ျားတွေဟာ versionitis ကိုရပ်ပြီးမဖြည်ခင်လအနည်းငယ်အကြာမှာကောင်းကောင်းစောင့်ဆိုင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ အပြောင်းအလဲများဤမျှလျင်မြန်စွာထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်ထားရန်လုံလောက်သောအရေးကြီးလှသည်။ Fedora အသင်းကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ပျက်စေတာလည်းအတူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လာမယ့်အပြောင်းအလဲတွေဟာကျွန်မအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Anaconda အသစ်ဟာအံ့သြစရာကောင်းပါတယ်။
ငါက fuck ဆိုတဲ့ xD အတော်များများနားမလည်ခဲ့ပေမယ်ကြည့်ရှု, ဟုတ်တယ်?
ငါ deb- မှီခိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်းရှိမရှိကြည့်ဖို့, ထွက်လာသည့်အခါငါကြိုးစားပါ, hehe